Darren Weir's Melbourne Cup bhiza rakapihwa magetsi nemagetsi pazuva remakwikwi, magwaro edare anoti | 1xbet
Mumhanyi weDarren Weir weMelbourne Cup Red Cardinal akapihwa magetsi nemagetsi pazuva remakwikwi gore rapfuura sechikamu chehurongwa hwekudzidzisa zvisiri pamutemo, magwaro ematare anoti. , mutevedzeri wake uye waanodzidzisa naye Jarrod McLean – vese vakamitiswa mujaho – pamwe nemaoko akatsiga William Hernan naTyson Kermond.
Vanotarisana nematareji makumi matatu nemana akabatanidzwa – kubva pakubheja huori, kuronga kunyengera vatariri nemhuka. kutambudza – kunosanganisira mabedhi Red Cardinal, Yogi uye Tosen Basil.Vet kuQueensland nzvimbo yekutemera mabhiza yakaita mishumo mipfumbamwe yekuchengetedza mhuka gore rino Verenga zvakawanda
Pombi yepombi nemidziyo yekuvhunduka yemagetsi zvainzi zvimwe zvezvishandiso zvaishandiswa paRed Cardinal neYogi. kuWarrnambool panguva yegore rapfuura yemijaho yemitambo, pakati pa24 Gumiguru neCup Cup musi wa6 Mbudzi.
Unyanzvi hwainzi hwaive chikamu che “zvisiri pamutemo dzidziso yekudzidzira” yakagadzirirwa kunyengedza vatambi vemujaho vachipa bhiza s pamucheto wekubheja, sekureva kwemasheji akaburitswa nedare redzimhosva reMelbourne neChitatu. >
Anonzi akaisa mabheti akafanana neakashata pamabhiza kusanganisira Yogi mumazuva apfuura.
Zvakare zvakaburitswa mumagwaro edare zvinopomedzerwa Tosen Basil akavhundutswa nemudziyo wemagetsi kuWarrnambool musi wa30 Gumiguru. kusaremekedza uye hunyengeri kumativi ese kwatiunza pano Verenga zvimwe
Mabhiza ese matatu anga ari mumakwikwi eMelbourne Cup asi Red Cardinal ndiye ega akatanga uye aive bhiza rekupedzisira kuyambuka mutsetse .
Weir, McLean naKermond vese vakapomerwawo mhosva yekubiridzira nekubiridzira vatambi veMijaho Victoria munguva yegore yadarika yemijaho yemitambo, pakati pa24 Gumiguru na17 Mbudzi.
Hernan anopomerwa yekuisa $ 50 kubheja paYogi panguva yemakwikwi musi wa2 Mbudzi muchinangwa chekuhwina $ 600, vachishandisa ruzivo rwakapfuudzwa kwaari pamusoro pehunofungidzirwa hutongi hwekudzidzisa zvisiri pamutemo naMcLean.
Varume vana vakatarisana nedare neChitatu kuti vateerere.Gweta ravo rakati nyaya iyi inogona kutamisirwa kuWarrnambool mushure mekunge magwaro awedzerwa.